Ilay fanasana tsy nampoizina | FJKM Amboniloha
Fahiny ela be hono rankizy, dia nisy mosary teo amin’ny tany sy ny fanjakana.
Samy sahirana ny fianakaviana vao mba mahita hanina hohanina.
Ilay mitafy voro-damba
Indray takariva efa maloka ny andro, indro lehilahy iray, mitafy voro-damba, nandondona sy nangataka isan-tokatrano.
Ary satria sady mandrivotra mamirifiry no nanerika ny andro, dia nanao saron-doha izy ary tsy tazana firy ny endriny.
Teo an-tanàna, fianakaviana maro no nandroaka azy, ny sasany tsy nanome na inona na inona, ny hafa nanao teny maharary… Fianakaviana tokana no mba nandray azy tao an-tranony ka nizara izay kely nananany tamin’ity vahiny mahonena.
Nanao fanasana ny mpanjaka
Fotoana vitsy taorian’izay, nampiantso fanasana ny mpanjaka, voaantso daholo ny ambany lanitra iray manontolo. Hisy fiaraha-misakafo amin’ny mpanjaka.
Gaga ny rehetra, tsy mbola nisy toa ity. Samy nanao izay fitafy mendrika indrindra ny tsirairay. Rehefa tafiditra tao an-dapa, hafaliana raha izao, hakanton-javatra izany, etsy ny haingon-trano volamena, erý ny firavaka vatosoa sarobidy.
Hatramin’ny lovia sy ny sotro ihinanana, volafotsy sy volamena avokoa.
Samy naka ny toerany ny tsirairay ary niandry. Niditra ny mpanjaka, naroso ny sakafo.
Akory anefa ny hahagagan’ireto nasaina, ny sasany nahazo tapa-mofo maina, ny sasany sakafo efa masiso, ny hafa tapa-mofo efa maina. Fianakaviana tokana izay napetraka teo akaikin’ny mpanjaka no nahazo hanim-pitoloha tena mafilotra.
Samy gaga ny rehetra, nifampanontany tena, nanomboka nitakoritsika, tsy sahy nimenomenona moa satria tao an-dapan’ny mpanjaka.
Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko
Nitsangana ny mpanjaka hanao fanambarana. Nangina ny rehetra. « Andro vitsivitsy lasa izay, nalefako teny aminareo ny zanako. Nijery sy nitazana hoe iza no mba antra olona sy tia namana. Akory ny hatairako, fianakaviana tokana no mba nandray azy tsara. Ireo anaty lovia ireo, tsy hafa akory fa izay narosonareo azy ihany. « Maro no nanenina, niteny anakam-po hoe raha mba fantatray mantsy (…) »
Roa arivo taona lasa izay, nandalo tetý an-tany ny zanaky ny Mpanjakan’ny mpanjaka. Hahatsiaro izany fandalovana izany isika ato ho ato. Tsy hitafy voro-damba sy hamangy isan-tokatrano anefa i Jesoa, saingy ny hafany ho ahy sy ho anao, mandritra izao noely izao :
Matio 25 : 40 « Dia hamaly ny Mpanjaka ka hanao aminy hoe : Lazaiko aminareo marina tokoa : Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. »
Catégories :	Dimy minitra	/ par AnjGab 3 décembre 2014